WHO oo war ka soo saartay xanuunka la soo dersay madaxweyne Trump | Dusta News
Home > General > WHO oo war ka soo saartay xanuunka la soo dersay madaxweyne Trump
October 3, 2020 October 3, 2020 Dusta News38Leave a Comment on WHO oo war ka soo saartay xanuunka la soo dersay madaxweyne Trump
Agaasimaha guud ee Hay`adda Caafimaadka Adduunka ee (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray qoraal uu caafimaad degdeg ah ugu rajeynayo Madaxweyne Trump iyo marwada koowaad.
Trump, waxaa laga yaabaa inaad xusuusataan, wuxuu si joogto ah WHO ugu cambaareyn jiray sida ay u xakameysay xanuunka safmarka ah. Horraantii sanadkan, wuxuu ku dhawaaqay inuu xiriirka u jarayo WHO, isagoo ku eedeynaya in laga xukumo Shiinaha oo uu fayrasku ka soo bilowday.
Mareykanka ayaa ahaa dalka dhaqaalaha ugu badan siiya hay`adda, oo dalalka caalamka ka caawisa daryeelka caafimaadka iyo cudurrada dillaaca.
Dr Tedros ayaa difaacay hay`adda xilligii uu eedeynta u soo jeediyay Mareykanka, wuxuuse markii dambe ballanq aaday inuu dib u eegis ku sameynayo sida ay hay`addu wax uga qabatay fayraska.
Ciidamada Dabi baarista oo baadi goobaya nin dad isku qoys ahaa ku dilay duleedka Muqdisho